ICambodia Inombolo Yocingo | Uhlu Lokuthengisa | Database lakamuva Lokuposa
Uhla lwezinombolo zocingo zaseCambodia
Database lakamuva Lokuposa » Uhla lwezinombolo zocingo zaseCambodia
Izinombolo zocingo zaseCambodia
Uhlu lwezinombolo zocingo zaseCambodia lunikeza lonke uhlu lwezinombolo zabathengi olusha nolusebenzayo. The Uhla lwezinombolo zocingo zaseCambodia izokusiza uqedele umkhankaso wokuthumela izingcingo ngefoni. Database Lokugcina Lokuposa ngaso sonke isikhathi ukuthengisa umakhalekhukhwini osezingeni eliphakeme kuholele ukumaketha kwe-b2c ukuthola ikhasimende elisha eliqondisiwe. Lokhu kuveza ezinye zezinto okufanele uzibheke kuhlu oluphezulu lwezinombolo zocingo oluholwayo oluholayo.
Ingenza uhlu lwakho lwefoni luhlanganise izindawo lapho amalungu emakethe yakho eqondisiwe ehlala khona bukhoma ngoba uthenga uhlu lwethu lwamuva lokumaketha lwe-SMS ngekhodi ye-zip, izwe, noma izwe lonke. Futhi, ukwenza kungenza i-oda ngokwezifiso nezindawo zakho eziqondisiwe, Isihloko Somuntu, Umsebenzi Womsebenzi, izigaba kanye neminye imininingwane.
Thenga iCambodia Consumer Ucingo Uhlu
Izinombolo Zefoni Zonke: 7,000
Uhlu Lwezingcingo Lwabasebenzisi BaseCambodia
Ufuna isiza esiphelele seCambodi Consumer Ucingo Uhlu bese iDatabase Yeposi Lamathupha noma i-Latestdatabase.com ingakwenzela. Isayithi elinokwethenjwa kakhulu ekunikezeni izidingo zakho maqondana nohlu lwezinombolo zocingo lwabathengi oluwusizo olukhulu lokuthengisa izingcingo, ukumaketha kwe-sms kanye nokubiza okubandayo ukwaneliseka kwebhizinisi lakho.
Uhlu lwezinombolo zabathengi baseCambodia noma uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi olusuka kuDatha Yokugcina Yama-imeyli liqukethe amarekhodi aphelele abukeziwe angama-7,000 ohlu lwabathengi abafinyelela ku-$ 250, ngesikweletu esikhokhwayo ngesikhashana esithile kanye nesoftware engalandelwa engaba yifomethi yefayela le-Excel CSV. Izindlela zokukhokha eziyikhadi le-visa, ikhadi le-master, i-paypal, i-skrill, inyunyana yasentshonalanga namakhadi amaningi namadivayisi wokukhokha kalula.
Ukuthenga, iCambodia Consumer Inombolo Yefoni Yenombolo kusuka ku-Datha Echazayo Ye-Mailing noma i-Latestdatabase.com, kuyindlela enhle kunazo zonke ongayisebenzisa ebhizinisini lakho, noma ngabe yenzelwe ukuthenga izingcingo, ukumaketha ngemiyalezo ye-sms kanye nemikhankaso yokubiza amakhaza noma ukuthengisa ngqo ngocingo kunelitshe elilungile amaklayenti akukhuthaza ukuthi uphumelele kakhulu kwibhizinisi lakho.
Uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi baseCambodia luyidatha eqinisekisiwe kunazo zonke ongasiqinisekisa ngocingo olusebenzayo nangendlela elula yokukholisa iklayenti lakho ukuthi lithenge imikhiqizo yakho nge-snap nje. Ukukunikeza imininingwane efanelekile evela kubasebenzi bethu bedijithali abanolwazi ukukwenza waneliseke.
ECambodia Uhlu lwezinombolo Zocingo Umbuzo & Impendulo